Psalmen 98 HTB - Nnwom 98 ASCB
1Monto dwom foforɔ mma Awurade,
ɛfiri sɛ wayɛ anwanwadeɛ bebree;
anya nkwagyeɛ ama no.
2Awurade ama wɔahunu ne nkwagyeɛ
na wada ne tenenee adi akyerɛ amanaman no.
ne ne nokorɛ a ɔdi akyerɛ Israelfoɔ;
asase ano nyinaa ahunu
yɛn Onyankopɔn nkwagyeɛ.
momfa nnwontoɔ nni ahurisie;
5Momfa sankuo nto dwom mma Awurade,
sankuo ne nnwontoɔ nnyegyeɛ,
6momfa totorobɛnto ne nnwennini mmɛn,
nteam ahosɛpɛ so wɔ Awurade, yɛn ɔhene no anim.
7Ɛpo ne abɔdeɛ a ɛwɔ mu nyinaa monworo so;
asase ne wɔn a wɔte soɔ nyinaa.
8Momma nsubɔntene mmɔ wɔn nsam,
mmepɔ nka mmom nto ahurisie dwom;
9ma wɔnto dwom wɔ Awurade anim,
ɛfiri sɛ ɔreba abɛbu ewiase atɛn.
Ɔde tenenee bɛbu ewiase atɛn
ASCB : Nnwom 98